Pinterest 7.32.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.32.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား လူမႈေရး Pinterest
Pinterest ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှာဖွေနေပါသလား သငျသညျဖက်ရှင် & ကြံ့ခိုင်ရေးအကြံပေးချက်များရှာနေသို့မဟုတ်အသစ်ချက်ပြုတ်နည်းများထွက်စစ်ဆေးနေအိမ်ပုံစံဒီဇိုင်းအယူအဆအဘို့ရှာဖွေ, သင်၏နောက်ကြီးမားသောခရီးသွားစွန့်စားမှုစီစဉ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, Pinterest အပေါ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုစူးစမ်း။ ကောင်းသောစိတ်ကူးများကဒီမှာ start!
အသစ်ကချက်ပြုတ်နည်းများထံမှဖန်တီးမှုနေအိမ်ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများရန်, သင်၏အသက်တာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေဘီလျံရှာဖွေပါ။ အပိုအိမ်မှာသိုလှောင်ရန်နေရာ Create, အသစ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာရွက်ရှာတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ် Pinterest အပေါ်တက်တူးထိုးလှုံ့ဆော်မှုရယူပါ။
Pinterest အပေါ်အတွေးအခေါ်များကို Save:
★လူနေမှုပုံစံစတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာပါ & ယိအပေါ်ဆောင်းပါးများနှင့်အကြံပြုအကြောင်းအရာများစူးစမ်း
★ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သင်၏နောက်အုပ်စုတစ်စုခရီးစဉ်, ပါတီသို့မဟုတ် DIY စီမံကိနျးအတှကျသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ
★သင် / တို့ကိုကျင့်စေ / မဝယ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေ Pinterest မှန်ဘီလူးနှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုကြိုက်ခြင်းနှင့်ဖမ်းယူသောကမ်ဘာပျေါတှငျစိတ်ကူးများ & ပုံရိပ်တွေထွက်ကြည့်ရှုပါ!
Discover မင်္ဂလာဆောင်အကြံပေးချက်များ, အလှအပလှုံ့ဆော်မှုနှင့်သင့်ကြီးမားသောနေ့အဘို့ဒီဇိုင်းအယူအဆ။ အကြံပြုသို့မဟုတ်ယိပုံရိပ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Explore, ခရီးသွားလာလှုံ့ဆော်မှု get သို့မဟုတ်သင်၏နောက်ညစာပါတီအသစ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ဖန်တီးမှုအစားအစာအတွေးအခေါ်များကိုဖတ်ပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေးအကြံပေးချက်များ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ DIY စီမံကိန်းများကိုစမ်းတို့နှင့်ကြီးသောဖက်ရှင်စတိုင် & အလှတရားအကြံပေးချက်များ၏တန်ချိန်နှင့်အတူ, Pinterest တစ်နေရာတည်း၌သင်တို့၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပေါငျးတို့သပေးသည်။
သငျသညျကွီးစှာသောဒီဇိုင်းအယူအဆသို့မဟုတ်သောအခါအသင်၏နောက် DIY စီမံကိနျးအတှကျလှုံ့ဆော်မှုဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ် sparks အရာကိုသိဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်မှုတ်သွင်း Get ။ သင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကို Save, အခြားသူများနှင့်အတူခေါင်းစဉ်နှင့်ရှယ်ယာများကသူတို့ကိုစုစည်းပြီး - အားလုံးသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကနေ!
- ပင်မစာမျက်နှာဒီဇိုင်း, ဗိသုကာ & DIY
- ကို Creative မင်္ဂလာဆောင်အကြံပေးချက်များ
- ခရီးသွား, ကြံ့ခိုင်ရေး & အလှတရား
- အစားအသောက်အသစ်ချက်ပြုတ်နည်းများ & ချက်ပြုတ်
သင်၏နောက် DIY သို့မဟုတ် home ဒီဇိုင်းစီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ရန် Pinterest download လုပ်ပါ။
Pinterest အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pinterest အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pinterest အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Pinterest အား အခ်က္ျပပါ
meeldeeb စတိုး 4.41k 1.55M
Pinterest ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Pinterest အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.32.0
ထုတ်လုပ်သူ Pinterest, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://policy.pinterest.com/privacy-policy
Release date: 2019-09-13 00:04:43
လက်မှတ် SHA1: B6:A7:4D:BC:B8:94:B0:F7:3D:8C:48:5C:72:EB:12:47:A8:F0:27:CA
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Carl Rice
အဖွဲ့အစည်း (O): Pinterest Inc
Pinterest APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ